Stremio: modernlọ ọrụ Multimedia nke oge a dị ka ihe ọzọ na Popcorn Time | Site na Linux
Stremio: modernlọ ọrụ Multimedia nke oge a dị ka ihe ọzọ na Popcorn Time
Ga n'ihu na nyocha ngwa, ma na ogige mgbasa ozi na ntanetị n'ịntanetị, nakwa ndị na-akwaga na Usoro Koodu, anyị nwere Stremio.
Ọ bụ ezie na Stremio, Ọ bụrịị ngwa ngwa ochie nke ọtụtụ ndị maara, ọ na-atọ ụtọ ịhụ ka o si bụrụ nke ghọrọ taa ọgbara ọhụụ na arụ ọrụ Multimedia Center (Media Center), nke na-enye azịza sara mbara maka online multimedia ntụrụndụ, na-eji ngwa oru plugins mfe iji wụnye. Ma site ugbu a Usoro Koodu.
Anyị dere n'oge na-adịbeghị anya banyere Popcorn Oge gụgharia ngwadị ka ọ na ulo oru a ohuru beta, 4.0, nke magburu onwe ya emeghe ngwa. N'ihe banyere nke a, n'onwe m, ejirila m ya afọ ole na ole gara aga, na mgbe m nwara ya ọzọ, ọ na-aga n'ihu na-ele ya anya, ọ bụ ezie na mgbe ụbọchị ole na ole jiri na-enweghị akụkọ, ọ dị mwute ndepụta okwu anaghị arụ ọrụ m, nke a mere m ji kwusi iji ya.
Popcorn Oge: New beta version 4.0 na-ekiri ihe nkiri na usoro online
Ma ọ bụ ezie, Stremio Ọ dị ka Oge Popcorn na ọrụ ya, n'ezie, ọ dị ugbu a karịa Kodi nke bx nnukwu Centerlọ Ọrụ Multimedia na-akwụghị ụgwọ ma na-emeghe, n'ihi iji ọmarịcha ihe plugins mfe iji wụnye. Ebumnuche nke na-eme ka ọ dị ka a siri ike Multimedia Center gini a mfe multimedia ngwa site na nkwanye.
Kodi 18 «Leia» rutere na nkwado maka DRM, emulators na ndị ọzọ
1 Stremio: Ntughari ohuru nke Alpha Ugbu a Mepee Isi Iyi
1.1 Gịnị bụ Stremio?
1.2 General njirimara
1.3 Gbanwee na Isi mmalite
2 Ihuenyo gbaa
Stremio: Ntughari ohuru nke Alpha Ugbu a Mepee Isi Iyi
Gịnị bụ Stremio?
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ngwa a dika:
"Stremio bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke oge a, nke emebere dị ka ihe dị mkpa maka ihe nkiri vidio. Na ya, ị ga-achọpụta, lelee ma hazie ọdịnaya nke vidiyo site na ngwa mgbakwunye dị mfe iji wụnye. Ihe nkiri, ihe ngosi onyonyo, TV ndụ ma ọ bụ ọwa weebụ, ihe niile ruru Stremio".
Stremio nwere njirimara na arụmọrụ ndị a:
Na-enye gị ohere ịchọ na ịchọpụta ọdịnaya ọhụụ: Daalụ maka igodo enyi na enyi ya site na edemede, ụdị, nhazi ọkwa, akụkọ, n'etiti ndị ọzọ, ma ọ bụ naanị site na ịchọ egwuregwu ederede ederede na nyocha ọchụchọ ya.
Na-enyere gị aka ịchịkọta ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya: Site na ịkọwapụta nke ọma ihe nkiri, usoro, anime, na ụdị vidiyo ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ na-ejikwa nnata nke ọkwa ọhụụ na ntọhapụ; na nkwenye dịka omume onye ọrụ si ele ihe anya.
Melite nhazi nke ọdịnaya kachasị amasị: Site a video n'ọbá akwụkwọ (video n'ọbá akwụkwọ) na ike ga-adị mfe kwukwara na otu click si niile inweta ọdịnaya. Ma nye iwu site na ụbọchị nke nsonye ma ọ bụ ngosi, ma ọ bụ site na mkpụrụ okwu iji.
Gbaa ndekọ nke ihe niile achọrọ ma ọ bụ nke ị ga-eri: Site na kalenda dị mfe ma dị irè.
Ọ na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọdịnaya ejiri na mgbasa ozi ma ọ bụ kọmputa dị iche iche nweta: Ekele dịrị ikike ịba ụba n'ọtụtụ ụdị Ngwaọrụ na sistemụ arụmọrụ.
Asingbawanye na ohere emelitere na ọdịnaya nke ọdịnaya: Site mfe echichi nke ukara na obodo plugins.
Gbanwee na Isi mmalite
Dabere na ndị mmepe ya, ọhụụ ọhụụ maka Stremio amalitela, site na mwepụta nke mkpụrụedemede alpha n'okpuru usoro mmeghe emeghe, nke enwere ike ịnweta na GitHub. Ọ na - ewepụta ihu igwe ọrụ ejiri emezigharị arụzigharị, jiri palette agba ọhụrụ wee lekwasị anya na imeziwanye ojiji. Ọzọkwa, ọ bụ nke mbụ nwere njirimara njirimara zuru oke mepụtara kpamkpam oghe emeghe, nke na-enye ikikere n'okpuru GPLV2.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara igba egbe a ị nwere ike ịnweta ihe ndị a njikọ gọọmentị.
Stremio nwere ndị nrụnye maka GNU / Linux na usoro ndị a:
.deb: Maka DEBIAN / Ubuntu Nkesa na ihe yiri ya (stremio_4.4.106-1_amd64.deb)
.rpm: Maka nkesa Fedora na Ihe yiri ya (stremio-4.4.106-1.fc31.x86_64.rpm)
O nwekwara Ebe nchekwa Arch / Manjaro (AUR) na isi iyi ya abịakọrọ GitHub ka a chikota ya na Distro obula. Na mgbakwunye, installers maka Windows, MacOS, gam akporo na iOS.
Na nkenke, dị ka anyị pụrụ ịhụ Stremio Ọ bụ magburu onwe ọzọ iji dochie Oge Popcorn y Kodi. Onwe m, m na-eji ya arụpụta afọ ojuju.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Stremio», oge a na ọrụ Multimedia Center (Media Center), nke na-enye azịza sara mbara maka online multimedia ntụrụndụ, na-eji ngwa oru plugins mfe iji wụnye, ma kwagara ugbu a na «Código Abierto»; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Stremio: modernlọ ọrụ Multimedia nke oge a dị ka ihe ọzọ na Popcorn Time
Enwerela m Kodi na ọ dị mma, m ga-enyocha nke a iji hụ etu o si arụ ọrụ. Daalụ
Ekele Juan! Daalụ maka okwu gị, enwere m olileanya na ị masịrị ngwa a.
Ikekwe m na-egbu oge. Mana echere m na Jellyfin bụ nhọrọ magburu onwe ya ịtụle. Banyere.
Ekele Gabriel! Daalụ maka okwu gị na onyinye gị. Enwere m olileanya ikwu banyere Jellyfin n'oge na-adịghị anya.
Megacubo: Ọ bara uru ọtụtụ asụsụ na ịba ụba ọkpụkpọ IPTV
Sandboxie: Launching Windows ngwa dị ka Open Source